Anguilla: Fanavaozana ny fizahan-tany ofisialy COVID-19
Home » Toerana fitsangatsanganana » Anguilla: Fanavaozana ny fizahan-tany ofisialy COVID-19
Ny birao fizahan-tany Anguilla (ATB) dia nanambara fa ny Komitin'ny Fetiben'ny fahavaratra Anguilla sy ny departemantan'ny tanora sy ny kolontsaina dia nanapa-kevitra sarotra hanafoana ny fampisehoana ny Fetiben'ny fahavaratra Anguilla 2020. Izany dia manaraka ny fanapahan-kevitra mitovy amin'izany izay noraisina momba ny Sakafo tsy mahazatra !, ny fankalazana ny fihinanam-bidy voalohany an'ny nosy natao tamin'ny volana aprily; Anguilla LitFest, Jollification literatiora ary ny hazakazaka amoron-tsambo manodidina ny Nosy amin'ny Andron'ny Anguilla tamin'ny Mey; ary andiany iray maharitra iray volana amin'ny volana Jona, mandrisika ny fialan-tsasatra, ny fahasalamana ary ny fahasalamana any Anguilla.
Ireo fanapahan-kevitra ireo dia noraisina ho fanajana ny torolàlana manerantany sy nasionaly navoaka miaraka amin'ny tanjon'ny fanalefahana sy ny fifehezana ny Covid-19 valan'aretina. Anguilla dia telo monja (3) no tranga voamarina hatreto, ary tsy mbola misy ny miandry, ary tsy misy tranga vaovao notaterina tao anatin'ny 28 andro lasa. Ireo olona telo dia efa sitrana tanteraka ary efa nosedraina mazava momba ilay virus.
"Mino izahay fa ny famerenana handaminana indray ireo hetsika ireo no hany fepetra raisina andraikitra," hoy i Donna A. Daniels-Banks, Lehiben'ny ATB. “Ny fahasalaman'ny mponina sy ny vahininay ary ny vahininay dia zava-dehibe indrindra ary mandray am-pitandremana ny fitsipiky ny fihatahana ara-tsosialy izahay. Ny fampiantranoana fivoriana lehibe amin'izao fotoana izao dia aloha loatra; matoky izahay fa ho lehibe kokoa ary ho mahavariana kokoa ny hetsika rehetra ataonay amin'ny taona ho avy, ary manantena ny handray ireo olona rehetra eto Anguilla izahay hiara-hankalaza azy miaraka aminay. ”
Ny birao fizahan-tany Anguilla dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy fanitarana ny vokatra fizahan-tany amin'ny nosy, hanatanterahana ny toerana itodiana Beyond Mahagaga! fampanantenana marika. Tamin'ny taona 2019, ny Destination Experience Unit dia nandefa andry dimy niainana traikefa - Adventure, Eats Extra mahazatra, Spa sy Wellness, hetsika sy kolontsaina ary tantaram-pitiavana - ary namorona andiana hetsika mifanentana ao amin'ny nosy hivarotra sy hampiroborobo ireo traikefa tena izy ireo.
Efa natomboka ny drafitra ho an'ny 2021. Sakafo hafakely! dia hatao indray ny volana aprily ho avy izao, nanitatra hetsika iray volana mandritra ny iray volana ho an'ireo “mpihinana sakafo” sy ireo mpankafy kulinarina. Nanomboka tamin'ny volana martsa ka hatramin'ny aogositra dia ny hetsika sy ny kolontsaina no ifantohana, miaraka amin'ny MoonSplash, LitFest, Andro Anguilla ary Fetiben'ny fahavaratra ny fifantohana, izay misy ny Poker Run.
Ny volana Jona 2021 dia notondroina ho volana fahasalamana sy fahasalamana, ahitana ireo fonosana fandosirana fahasalamana tsara indrindra sy serivisy spa spaoro - izay Anguillian manokana - yoga, sakafo ara-pahasalamana ary maro hafa.
Ny volana Fahalavoan'ny volana septambra, oktobra ary novambra dia natao hampahafantarana ny Adventure Pillar, miaraka amina fitsangatsanganana sy hetsika vaovao toy ny fitsangatsanganana zohy, hetsika ara-panatanjahantena, seranam-piaramanidina, fitsangatsanganana natiora ary maro hafa. Ny andry farany, Romance, dia hasongadina amin'ny Novambra amin'ny 1st ho an'ny 15th, rehefa aseho avokoa ny fonosana fialamboly tantaram-pitiavana Anguilla, fampakaram-bady, volan-tantely ary fananana iray-of-a-kind.
Fialana amin'ny krizy ve ny fizahan-tany any an-toerana?
Seychelles fizahan-tany manao fanadihadiana momba ny fiantraikan'ny COVID-19